Ma Isagaa Lahaa Mulkiyada Pogba? Football Leaks Oo Banaanka Soo Dhigay Lacag Waali Ah Oo La Siiyay Wakiilka Pogba Ee Mino Raiola Iyo FIFA Oo Baadhitaan Bilawday Man United & Juventus. - GOOL24.NET
Ma Isagaa Lahaa Mulkiyada Pogba? Football Leaks Oo Banaanka Soo Dhigay Lacag Waali Ah Oo La Siiyay Wakiilka Pogba Ee Mino Raiola Iyo FIFA Oo Baadhitaan Bilawday Man United & Juventus.
Xidhiidhka kubbada cagta aduunka ee FIFA ayaa bilaabay baadhitaan ka dhan ah qaabkii uu Pual Pogba ugu biiray Manchester United ee uu kaga baxay Juventus kaas oo hore baadhitaan loogu sameeyay balse wakiilka Pual Pogba ee Mino Raiola ayaa hadda biyo kulul ku dhex jiray halka kooxaha Man United iyo Juventus ay bixiyeen lacago waali ah oo lagu haysto qaabkii ay u bixiyeen.
Fooball Leaks ayaa halkiisa ka sii wada in uu helo xogo sir ahaa oo qarsoonaa waxayna soo bandhigeen in lacag ku dhaw kala badhkii qiimihii Pogba uu ugu biiray Man United uu Mino Raiola dilaal ahaan u qaatay waxaana soo baxday faah faahin dheeraad ah.
Xog sir ah oo uu helay Football Leaks isla markaana lagu daabacay wargayska Mediapart ayaa lagu cadeeyay in kooxda Manchester United ay Mina Raiola dilaal ahaan u siisay 22 milyan euros waxaana xogan lagu xaqiijiyiay in Man United ay lacagtan ku jabisay sharciga UK iyo FIFA ee lacagta la siinayo wakiilada kadib markii ay Pual Pogba ka soo ceshatay Juventus.
In Manchester United ay lacag dhan 22 milyan euros siisay wakiilka Pogba ee Mina Raiola waxay keentay in FIFA ay bilawdo baadhitaan kale kaas oo lagu ogaanayo haddii uu wakiilka Pogba ee Mina Raiola uu qayb ka ahaa mulkiyada xidiga reer France ee Pual Pogba taas oo sharciga FIFA si cad uga hor imanaysa.
Dhinaca kale waxaa xogta Football Leaks ee Mediapart lagu shaaciyay in kooxda Juventus ay iyaduna Mina Raiola siisay lacag dhan 27 milyan euros kadibb markii uu kooxdeeda ka caawiyay in ay lacagtii abid ugu badnayd ka heshay iibkii Pogba ee Man United.
Waxaa layaab noqotay in wakiilka Pual Pogba ee Mina Raiola uu wadar ahaan ka helay iibkii Pogba ee kooxaha Manchester United iyo Juvnetus lacag dhan 49 milyan euros taas oo ah kala badh in ka badan lacagtii ay Man United ku iibsatay Pogba.
In Manchester United iyo Juventus lacag sidan u badan siiyeen wakiilka Pogba ayaa keentay in FIFA lagula taliyay in la ganaaxo kooxaha Manchester United, Juventus iyo waliba wakiilka arintan dhexda ugu jira ee Mina Raiola.
Si kastaba ha ahaatee, xogaha sirta qarsoon ee uu Football Leaks soo bandhigayo ayaa madaxa isku galinaysa xidhiidhada kubbada cagta iyo waliba kooxo badan oo qaladaad lagu helay iyada oo Man United dhexda ugu jirta in ay jabisay sharciga FIFA iyo waliba sharciga FA-ga Igiriiska.